facebook.com | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News | Page 759
Home facebook.com Page 759
Donald Trump oo shaaciyey in uu tarxiili doono malaayiin Ajaaniib ah.
Madaxweynaha Cusub ee alka Mareykanka, Donald Trump ayaa sheegay in Muhaajiriin Tiradoodu dhexeyso laba illaa saddex Milyan oo Ruux oo sharci-darro ku jooga Maraykanka uu Tarxiili doono Marka uu Xafiiska la Wareego. Trump oo Wareysi siiyay Telefishinka Maraykanka laga leeyahay ee CBS, ayaa sheegay in uu si Gaar ah u...
Munaasabado lagu maamuusayo xuska sanad-guuradii 73aad ee ka soo wareegatay markii la aas aasay ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa maanta lagu wadaa in ay ka dhacaan qeybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Maanta oo kaliya ayaa sanad kasata ayaa la qabtaaa munaasabada lagu maamuusayo xuska sanad-guurada markii la...
Xeerka DHawrista Qaxootiga oo Puntland Barlamaankeedu meel mariyey.
Gollaha wasiirada dowlad gobolleedka Puntland ayaa meel mariyay xeerka ilaalinta qaxootiga, kaddib war saxaafadeed ka soo baxay shirkoodii toddobadlaha ahaa ee Khamiistii shalay. Xeerkan ay isku raaceen gollaha wasiirada Puntland ayaa la sheegay in uu qeexayo cida loo aqoonsan-karro qaxootiga,waxaa kalo uu caddeynaya cida ay ka reeban-tahay in loo aqoonsado...
Hawl galkii degmada Awdheegle oo la sheegey in ay ka qeyb qaateen ciidamada comandawska Soomaaliya.
Ciidammo Somali ah ayaa la sheegay in ay ka Qayb-qaateen hawlgalkii habeen hore laga fuliyay degmada Aw-dheegle ee Gobolka Shabeellada Hoose, kaasoo khasaarihii ka dhashay ay illaa hadda kasoo baxayaan warar kala duwan. Hawlgalkan oo ay fuliyeen diyaaerado kuwa qummaatiga u kaca ah ayaa waxaa la sheegay inay ciidamadii la...
Bambaanooyin lagu weeraray Guriga Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya
Bam gacmeed ayaa xalay lagu weeraray guriga Xildhibaan Macalin Cali Aadan Cadoow, oo ku yaalla Xaafada Taleex ee Degmada Hodan ee Magaaladda Muqdisho. Dadka deegaanka ayaa sheegay, in kooxihii weerarka fuliyay ay baxsadeen. Lama shaacin, khasaaraha ka dhashay Qaraxyada. Masuuliyiinta ammniga dowladda ayaa sameeyay howlgallo, waxaana la sheegayaa in ay dad ku...
Wasiirada Arrimaha Debedda Jaamacadda Carabta oo Shir uga Furmey Qaahira/Maxaa lagaga Hadlayaa?.
Wasiirada Arrimaha Dibadda Dowladaha Carabta oo shir ku yeeshay magaalada Qaahira ayaa waxa ay ka hadleen arrimaha ka taagan qaar ka mid ah dalalka Carabta, kulanka waxaa si gaar ah looga hadlay xiisadaha ka taagan dalalka Syria, Ciraaq, Falastiin, Libya iyo Soomaaliya. Xoghayaha Guud ee Jaamacadda Carabta Mudane Axmed oo...
Danjiraha Soomaaliya u fadhin doona dalka Australia oo M/weyne Xasan SHeekh ka gudoomey waraaqaha aqoonsiga.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xarunta madaxtooyada kaga gudoomay warqadihii aqoonsiga danjiraha cusub xukuumadda Australia ee Somalia, wakiilkana uga noqon doona Somalia, Mr John Feakes. Xasan Sheekh ayaa wakiilka Australia uga warramay xaaladda Soomaaliya iyo horumarka ilaa iyo haatan lagu tallaabsadey ee dhinacyada dowlad-dhisida, baahinta xukunka, amniga iyo...
Gaalkacyo oo xaalad kacsanaan ah dib ugu laabatey walaw ay maanta deganeyd.
Xaalada Gaalkacyo ayaa saaka daggan kadib dagaal halkaa shalay ka dhacay oo inta la xaqiijiyay ay ku dhinteen labo qof. Dagaalka ayaa u dhexeeyay ciidamada Puntland iyo ciidamada maamulka Galmudug. Dagaalka ayaa ka dhacay xaafada Garsoor ee magaaladaasi Gaalkacyo shalay subax ayadoon la ogeyn sababta dhalisay. Dhawaan dagaalo halkaa ka dhacay...
1...758759760...763Page 759 of 763